Saadaasha Hawada - Saadaasha Shabakada | Saadaasha Websaydhka (Bogga 2)
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xiirashada iyo cawaaqibka ay ku leedahay duulimaadka. Halkan ka baro.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato duufaanta Lorenzo, asalkeeda iyo xiriirka suurtagalka ah ee isbeddelka cimilada.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta duufaanka Gloria ee Spain la kulantay bilowgii sanadka 2020. Baro asalkeeda iyo cawaaqibkeeda.
Waxaan si faahfaahsan kuugu sheegeynaa dhammaan sifooyinka iyo muhiimada miisaanka duufaanka Fujita. Halkan ka ogow dhammaantood.
Roob ororax ah
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato roobka kuleylka ah iyo sifooyinka uu leeyahay. Waxbadan ka baro roobkaan noocan ah.
Filomena iyo baraf ka dhacay Spain 2021
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato duufaanta Filomena, sababaheeda iyo natiijooyinka ka dhalan kara. Waxbadan ka baro barafka qarniga.
Roobab isku dhafan
Baro wax walba oo ku saabsan roobabka isdaba jooga, qaab dhismeedkooda iyo astaamahooda. Waxaan si faahfaahsan ugu sharaxeynaa halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wejiga diirran, astaamahiisa iyo qaab dhismeedkiisa. Halkan ka baro waxbadan.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa sida qashinku u unko, maxay yihiin waxyeeladiisa iyo cawaaqib xumadiisa.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u baratid sida loo xisaabiyo heerka barafka. Baro wax badan oo ku saabsan waxa la tixgelinayo.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato fulgurite iyo sifooyinkiisa. Waxbadan ka baro sameyskan yaabka leh.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato parhelion iyo astaamaheeda. Ka baro wax badan oo ku saabsan dhacdadan jawiga.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan ubaxnimada, astaamaheeda iyo saameynta ay leedahay. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ay tahay duufaan qalalan iyo sida ay u samaysmaan. Waxbadan ka baro halkan.
Waxaan kuu sharaxeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee falaadhaha jira iyo astaamahooda ugu waaweyn.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ay yihiin dabeylaha xagaaga iyo sida ay u sameysmaan. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa sida ay u curyaan roobab mahiigaan ah iyo cawaaqibka ay leeyihiin. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan astaamaha daawada iyo cawaaqibka ay leedahay. Baro dhammaan wixii ku saabsan dhacdadan cimilada daran.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan asalka iyo quraafaadka Griigga ee Ixion iyo qorraxda 22º. Wax walba halkan ka ogow.
Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa dhammaan astaamaha iyo asalka rissagas. Wax dheeri ah ka baro ifafaalehan daadadka ah.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa gacantu tahay, sida ay u sameysantahay iyo saameynteeda. Waxbadan ka baro ifafaalaha cimilada daran.
Rime waa dhacdo saadaasha hawada oo ka tagta muuqaallo qurxoon. Halkan ka baro sida ay u sameysantahay iyo asal ahaan halka ay ka timid.
Qoraalkan waxaan si faahfaahsan ugu sharraxeynaa ku noqoshada kuleylka iyo sida ay u dhacdo. Baro sida ay ula xiriirto wasakheynta.
Waxaan sharaxeynaa asalka wabiga ciida ee dhaliyay muranka badan. Tani waa dhacdo yaab leh. Halkan ka baro sirta.
Qormadan waxaannu kuugu sheegaynaa astaamaha ay yihiin, sida ay u samaysan yihiin iyo cawaaqib-xumada ay leeyihiin cilaaqaadka. Halkan ka baro waxbadan.
Maqaalkan waxaan ku sharaxeynaa waxa uu buubku yahay iyo sida uu u saameeyo nolosha badda. Miyay cawaaqib ku yeelan doontaa mustaqbalka? Halkan ka baro.
Waa maxay wareegga cirifka
Qoraalkan waxaad ku awoodi doontaa inaad ku ogaato waxa wareegga cirifku yahay iyo saameynta uu ku leeyahay saadaasha hawada ee aagga ay dhibaatadu saameysey. Halkan ka baro.
Waxaan kuu sheegi doonaa sida firfircoonaanta miisaanka hawadu u shaqeeyaan. Ogow noocyada miisaanka hawada iyo sida ay muhiimka u yihiin.
Qoraalkan waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan brontophobia: cabsida danab iyo onkod. Gali si aad u ogaato sida loo garto.
Qoraalkan waxaad ka heli kartaa qarsoodiga qaansoroobaadyada dabka. Ogow sababta ay ifafaaladan cajiibka ah u sameysantay.
Foodda oo ay ku jiraan
Saadaasha hawada erayga qarsoon ee hore waxaa loo isticmaalay in lagu tilmaamo xaalad saadaasha hawada gaar ah. Qodobkaan waxaan si faahfaahsan ugu sharaxeynaa.
Waxaan si faahfaahsan ugu sharaxeynaa waxa uu yahay qabowga hore iyo sida uu u sameysan yahay. Halkan u gal si aad wax uga ogaato dhammaan astaamaheeda iyo cawaaqibka. Ha moogaan!
Gali si aad u aqriso maqaalkan si aad u ogaato waxa roobku yahay iyo sida uu u samaysan yahay. Ogow wax kasta oo ku saabsan dhacdadan saadaasha hawada iyo cawaaqibkeeda.
Baro fikradaha isku soo duwidda iyo ku kala duwidda saadaasha hawada iyo muhiimadda ay leeyihiin. Halkan waxaan kuugu sharxeynaa wax walba.
Waxaan si faahfaahsan u sharaxeynaa waxa uu dhaxan yahay iyo sida uu u sameysan yahay. Halkan u gal si aad u barato habka tababarka iyo cawaaqibkiisa.
Qodobkaan waxaad ka heli kartaa wax walba oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qubeyska. Gali oo baro inaad ka soocdo dhacdooyinka kale.
Baro waxa ceeryaantu tahay iyo sida ay uga duwan tahay ifafaalaha kale ee cimilada sida ceeryaanta iyo ceeryaanta. Wax walba si fiican u ogow.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa uu yahay ceeryaantu iyo waxa ay kaga duwan tahay ceeryaanta. Halkan gal si aad waxbadan uga ogaato.
Qoraalkan waxaad ku baran kartaa waxa duufaanta tahay, astaamaha ay leedahay, sida ay u sameysantahay iyo noocyada jira. Ha ka waaban inaad gasho si aad wax badan uga ogaato.
Qormadan waxaan kaga hadlaynaa aerolith-ka wuxuu yahay iyo asalka iyo aasaaskiisa suuragalka ah. Ha seegin milicsiga dhacdadan yaabka leh.
Baro dhammaan waxyaabaha ku saabsan jilicsanaanta maqaalkan. Waxaan sharaxeynaa sababta ay ifafaalaha saadaasha hawada loo sameeyay iyo sida ay u dhaliso barafka.
Halkan gal oo ogow waxa baraf-dhaca ahi yahay iyo sida uu u samaysan yahay. Baro waxtarka duufaanka barafka waqtiyadii hore.
Dhaxan-madow ayaa ah dhacdo si daran u waxyeeleysa dalagyada. Waxaan kuu sheegeynaa sida loo ilaaliyo dhirtaada. Gali oo baro dhammaan waxyaabaha ku saabsan ifafaalahaas.
DANA, Niyad-jabka Gooni Goon ee Heerarka Sare
DANA (Niyad Jabka Go'doonsan ee Heerarka Sare) waa xaalad jawi hawo leh oo kicisa hoos u dhaca qabow oo ay la socoto roobab mahiigaan ah Wax walba ka ogow.
Hoos u dhaca qabowgu wuxuu keenaa roobab aad u daran oo sababa masiibooyin iyo waxyeelo magaalooyinka iyo magaalooyinka. Halkan ka baro sida loo aasaasay iyo sababta loogu talagalay.
Polar aurora waa dhacdo dabiici ah oo mudan in la arko taasoo cirka u rogeysa cagaar. Ma rabtaa inaad ogaato waxa astaamihiisu yihiin iyo sida loo sameeyo? Hadda soo gal.
Duufaantu waa mid xiiso leh laakiin ifafaale cimilo aad u khatar badan. Halkan ka baro wax walba oo iyaga ku saabsan.
Qubeyska dhoobada ayaa ah dhacdo saadaasha hawada oo ka dhacda Spain xagaaga iyo xagaaga. Ma rabtaa inaad ogaato sababta ay u dhacdo?
Baro dhammaan astaamaha iyo hababka sameynta ee cyclogenesis qarxa. Ma rabtaa inaad ogaato saameynteeda iyo sababaha keena?
Ifafaale cimilo aad u xun oo kaa yaabin doona
Waxaan ku tusineynaa dhacdooyinka saadaasha hawada ee xad dhaafka ah ee ka dhacay meeraheenna iyo saameynta ay ku yeesheen. Ma rabtaa inaad iyaga ogaato?
Waa maxay duufaanku sidee buu ku dhacaa
Halkaan waxaad ka ogaan kartaa waxa ay tahay, sida uu duufaanku u dhacayo iyo cawaaqib xumada uu ku yeelan karo magaalooyinka iyo buuraha.
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa samaysanka duufaannada iyo hillaaca iyo astaamaha ay leeyihiin. Marabtaa inaad waxbadan kabarato?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha iyo samayska Nalalka Waqooyiga iyo sida loo arko Nalalka Waqooyiga ee Norway. Ma rabtaa inaad wax ka barato?
Daadadku waa ifafaalooyin sababi kara waxyeelo iyo dhibaatooyin baaxad leh bani aadamka. Laakiin maxay dhab ahaan yihiin maxayse yihiin sababahooda? Gali oo wax walba waan kuu sheegi doonaa.
Isbaanishka barafka hoostiisa: heerkulka illaa -8ºC wuxuu ka tagayaa 60 waddo
Duufaan qabow iyo baraf wata ayaa ku reebtay kala bar dalka Isbaanishka baraf iyo baraf. Ilaa 60 waddo ayaa la jaray kumanaan qofna koronto la’aan ayaa ku dhacday.
Cape Town biyo la’aan ayaa kajirta abaarta
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa abaarta ba'an ee ku habsatay Cape Town, taas oo sabata iyada oo aan la dhimin isticmaalkeeda, ay dhammaan doonto Abriil 12.
Ciudadanos wuxuu soo jeedinayaa isbeddelada PHN si uu ula qabsado isbeddelka cimilada
Mashruucani wuxuu ka hadlayaa isbeddelada ay soo jeediyeen Muwaadiniintu si loogu waafajiyo Qorshaha Biyo-biyoodka Qaranka ee isbeddelka cimilada.
Muddo ka badan labaatan sano, daadadku waxay noqon doonaan astaamo saadaasha hawada oo saameyn ku yeelan kara in ka badan 55 milyan oo qof.
Kala duwanaanshaha cimilada ba'an ee u dhexeeya Sydney iyo Mareykanka
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa kala duwanaanshaha ba'an ee cimilada u dhexeeya Sydney iyo Mareykanka. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato xaaladdan?
Olole uu bilaabay Mapama si loola dagaallamo abaaraha
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa ololaha wacyigelinta abaaraha ee ay bilaabeen Mapama. Ma rabtaa inaad ogaato waxa ololahani ku saabsan yahay?
Baraf ka dhacay Saxaraha markii ugu horreysay muddo 39 sano ah
Markii ugu horraysay muddo 39 sano ah ayuu baraf ku da’ay Saxaraha, magaalada Ain Sefra (Algeria). Gali si aad ugu raaxeysato sawirradan cajiibka ah.
Roobabkii ugu dambeeyay ma xalliyaan dhibaatada abaarta
Mashruucani wuxuu muujinayaa heerarka biyaha kaydka ah ee ku jira berkadaha biyaha ee Isbaanishka ee xaaladda abaarta. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Sanadihii la soo dhaafay, abaaro waaweyn ayaa saameyn ku yeeshay Muritaaniya, halkaas oo ay horeyba u joogeen 120.000 oo caruur ah oo ay hayso nafaqo daro ba’an.
Xaaladda abaaraha ee Spain waa mid laga naxo
Qoraalkan waxaad ku arki doontaa xaaladda kaydadka Isbaanishka waxaadna arki doontaa darnaanta abaarta aan la dhibtoonno. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Saamaynta abaarta Spain
Abaarta Spain soo food saartay ayaa ah tii ugu xumeyd 20-kii sano ee la soo dhaafay. Heerarku way ka hooseeyaan sidii hore. Maxaad ka qabataa
Duufaanta Ana ayaa timid Spain
Duufaanta 'Ana' waa dhacdo saadaasha hawada oo saameyn ku yeelatay jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic. Ogow waxyeelada ay geysatay iyo halka ay ku socoto.
Waa maxay duufaan sidee u sameysmaa
Waxaan kuu sharaxeynaa waxa ay tahay duufaantu, sida ay u sameysantahay iyo noocyada kala duwan ee jira si aad waxbadan uga ogaato dhacdadan saadaasha hawada.
NASA waxay samaysay muuqaal xiiso leh oo muujinaya duufaanada waaweyn, iyo sida dabayshu u qaaday cusbada badda iyo waxyaalaha kale.
Numa, waa duufaan aan caadi ahayn, oo ku dhow Griiga iyo Sicily
Meel u dhow Griiga iyo Sicily, duufaan ka socota badda Mediterranean, oo la yiraahdo Numa, ayaa ka socota, taas oo horey u dishay 15 qof. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Isbaanishka biyo la’aan ayaa ka jirta
Kaydadkii biyaha ee Spain ayaa gabaabsi ah biyihii. Heerkulka sare iyo roob yaraanta ayaa saameynaya dalka oo dhan.
Daraasad ay sameysay Jaamacadda Zagaroza ayaa muujisay in 6 ka mid ah 16-kii xagaa ee ugu qalalnaa ay dhaceen 10-kii sano ee la soo dhaafay. Ma sabab u tahay isbeddelka cimilada?
Weligaa ma maqashay donuts baraf? Gali oo soo hel sida ay u samaysan tahay ifafaalahaan saadaasha hawada leh ee dhifka ah
Xilliga Baasifiga ee 2017 wuxuu leeyahay xiddig cusub: Duufaanta Lan. Dhacdadan xoogga leh waxay kusii dhowaanaysaa Japan halkaas oo ay ka dhalan karto waxyeello weyn.
Duufaanta Ophelia ayaa timid maanta dalka Ireland sidoo kale waxay noqoneysaa duufaantii ugu horeysay ee ugu weyneyd ee gaarto Yurub rikoor ahaan.
Duufaanta kuleylaha ah ee Ophelia ayaa gaari karta Galicia
Ophelia, duufaan cusub oo kuleyl ah oo laga sameeyay Atlantic, ayaa mari karta Galicia dhamaadka usbuuca. Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo ilaa hadda la ogyahay.
Horeba waa sanadkii afaraad ee qalalan ee dhibku soo gaadhay Beerta Qaranka oo kala duwanaanshaha kala duwanaanshaha noolaha ee ay taageerto iyo isu dheelitirka bey'adda.
Xilliga duufaanka ee 2017 waa mid si gaar ah u firfircoon: oo leh sagaal duufaanno, waa kan ugu daran in ka badan qarni.
Niyad jabka kulaylaha wuxuu halis gelinayaa inuu burburiyo Costa Rica, Nicaragua iyo Honduras
Waxaan kugu wargalineynaa niyadjabka kuleylka kuleylaha ee ka dhashay Oktoobar 4, 2017 ee Kariibiyaanka, taas oo Kaariibiyaanka ku heysa feejignaan cas.
Sababta El Niño ayaa la ogaaday
Sida laga soo xigtay daraasad cusub oo ku saleysan heerarka dhul-gariirka iyo saadaasha saadaasha sare, dhacdada El Niño waa in dib loo eego.
Biyo yaraanta sanadkan ayaa ku eg 15% wax ka yar sanadkii hore. Waxaa loo tixgeliyey inay tahay xilli aad u qalalan Spain oo dhan.
Duufaannada hawada sare, cadowga aamusan ee Dunida
Miyaad maqashay duufaanno bannaan? Kuwani waa ifafaalooyin cawaaqib xumo ku yeelan kara Dunida. Raadi sida ay u samaysan yihiin.
Kaymaha leh kala duwanaanshaha badan ayaa si fiican ugu adkeysanaya abaarta
Kala duwanaanshaha kala duwanaanshaha nidaamka deegaanka ayaa lagama maarmaan u ah iska caabbinta nooc kasta oo saameyn deegaanka ah. Ma rabtaa inaad ogaato sababta?
Waxaan aragnay waxyeelada halista ah ee ka dhalan karta marka tsunami dhacdo. Ma garan karnaa sida ay u samaysan yihiin iyo waxa la sameeyo haddii ay dhacdo digniinta tsunami?
Dhacdada La Niña
Waxaa sidoo kale jira dhacdo ka soo horjeedda El Niño oo loo yaqaan La Niña. Waxay soo saartaa isbeddello muhiim ah oo ku yimaada cimilada meeraha iyo waxa ka dhalan kara ayaa muhiim ah.
Puerto Rico iyo Jasiiradaha Virgin, gebi ahaanba waa la burburiyey ka dib marinkii Hurricane Maria
Duufaantii Maria ayaa waxyeello badan u gaysatay Caribbean-ka, gaar ahaan Puerto Rico iyo Virgin Islands, oo burbursan.
Daraasad ayaa xaqiijinaysa kororka roobab ee qaabka roobdhagaxyaalaha
Daraasada waxaa lagu daabacay joornaalka Cilmi baarista cimilada waxayna daraasad ku samaysay diiwaanka roobdhagaxyaalaha laga soo bilaabo 1948 ilaa 2015. Maxay yihiin natiijooyinka aad heshay?
. Duufaanta si toos ah u taagan laba ka mid ah wadiiqooyinka ugu mashquulka badan adduunka ayaa si gaar ah u xoog badan.
Waxaan ka warbixineynaa duufaanta Maria, oo u hanjabeysa jasiiradaha Caribbean maalmo un kadib markii ay ku dhufatay Irma.
Kuwani waa saamaynta isbeddelka cimilada ee ina sugaya mustaqbalka, si sii kordheysa u calaamadeysan uguna daran. Kani ma wejiga ugu xun ee isbeddelka cimilada?
Duufaanta María waxay ku bilaabatay duufaan kuleyl ah, laakiin Axaddaan waxay noqotay duufaan, iyadoo diiwaangelineysa dabeylo gaaraya illaa 120 km / saacaddii
Ka dib Harvey, iyo Irma, hadda waxaa imanaya Maria, duufaan kale
Duufaanta kulaylaha ee María, oo saacado kooban gaadhay heerka duufaanta, waxay u hanjabaysaa aagagga ku dhuftay marinka Hurricane Irma
Duufaanta Talim ayaa ku degtay dalka Japan, oo ah wadan qeybtiisa koonfureed ay heegan ugu jiraan roobab culus iyo dabeylo xoogan.
Sidee duufaannadu u awood u leeyihiin inay faa'iidooyin badan u keenaan meeraha, oo ay u shaqeeyaan sidii farsamo nidaamisa wax kasta heerkulka illaa nidaamka deegaanka.
Duufaanta Irma waxay bedeshay midabka jasiiradaha Virgin
Jasiiradaha Virgin Islands, oo lagu gartaa inay ku daboolaan dhirta kulaylaha ah, ayaa lumiyay midabkoodii cagaarnaa ka dib markii ay ku halaagsatay Duufaanta Irma.
Duufaanta Irma waxay kusii socotaa dhanka Waqooyiga Florida, qaybteeda waxay hoos ugu dhacday 1
Duufaanta Irma waxay dhexda ugu jirtaa marinkeeda Florida. Dabaylaheeda ayaa hoos u dhacay, waxaana la filayaa inay sii wadaan. Wuxuu ka tagay burburka weyn
Duufaanta Irma, oo hadda ah duufaantii ugu weyneyd ee laga abuuro Badweynta Atlantik, ayaa ku sii dhowaanaysa aagag aad u tiro badan. Waxaa jira ogeysiisyo daad-gureyn ballaaran ah.
Soo ogow farqiga u dhexeeya duufaannada iyo duufaannada, sida ay u samaysmaan iyo astaamaha mid kasta. Kee baa khatar badan?
Duufaan cusub, oo lagu baabtiisay magaca Irma, ayaa kusii jeedda dhanka Caribbean-ka. Ka gudubka duufaanka kuleylka ah ee duufaanka Nooca 3 hal maalin gudaheed.
Kaydka Mansilla ayaa ka tagaya magaalo ay abaartu daboolka ka qaaday
Abaarta iyo heerarka biyaha oo hooseeya awgood, reer Mansillans waxay awoodaan inay dhex socdaan magaalada hadda soo ifbaxday.
Wixii ka dambeeyay Harvey iyo daadadkii waaweynaa ee uu kaga tagay baraarugiisa. Dhamaan qalabka iyo macnayaasha loo isticmaalay soo celinta aaga balaaran
Waxaa jira daraasad cusub oo tilmaamaysa in nidaamka deegaanka deegaanka uu waqti dheer ku qaato ka soo kabashada abaarihii ugu dambeeyay marka loo eego kuwii dhacay qarnigii XNUMXaad.
Harvey ayaa Jimcihii ku dhufan kara Texas duufaan
Murugada Tropical depression Harvey ayaa la filayaa inay gaarto xeebta Gobolka Texas iyadoo duufaan ah Jimcaha. Ogeysiisyada kormeerka ayaa la soo saaray.
Khatarta dabka ee ku dhowaad dhammaan Isbaanishka waxay u dhexeysaa mid aad iyo aad u sarreeya
Heerkulka sare ee toddobaadkan garaacaya ayaa ficil ahaan dalka oo dhan geliyay khatar aad u sareysa, khatarta weyn ee dabka awgeed.
Farqiga u dhexeeya Sunstroke iyo Heat Stroke, sida aan isaga difaaci karno iyaga
Fahmitaanka faraqa iyo sida kulaylka ama istaroogga kuleylku u dhaco xagaaga waa lama huraan, labadaba inaan iska ilaalino iskana ilaalino xumaanta ka sii weyn.
Isbaanishku waa dalka leh hirarka kuleylka ugu badan Yurub
Isbaanishku wuxuu ka mid yahay wadamada mowjadaha kuleylka u dhaqmaan si aad u xoog badan uguna badan. Maxaan ka qaban karnaa tan?
Waa maxay duufaannada cagaaran?
Ma maqashay duufaanno cagaaran? Gali oo waanu kuu sharxi doonaa waxay yihiin iyo sida ay u samaysan yihiin astaamaha saadaasha hawada.
Laba dhulgariir oo xoog leh ayaa ka dhacay bartamaha iyo waqooyi-galbeed Shiinaha
Laba dhulgariir oo xoog leh ayaa ka dhacay Shiinaha wax ka yar 24 saacadood, oo ay weheliyaan in ka badan 120 ruxitaanno ah. Adeegyada gurmadka degdegga ah ayaa sii wadaya caawinta aagagga.
Kuleylka kuleylka ku dhufanaya Yurub maalmihii la soo dhaafay, ee loogu magac daray Lucifer, ayaa barafka ka dhalaalaya buuraha buuraha Alps ee Talyaaniga.
Stropical Storm Franklin, oo horeyba ugu dhacday gacanka Yucatan, ayaa markale dhulka dhigi doonta, oo ay u badan tahay inay tahay duufaan.
Kuleylka ayaa dhalaaliya Mallorca
Maalmihii ugu dambeeyay ee Julaay iyo maalmaha ugu horreeya ee Agoosto waxay si gaar ah ugu kululaanayaan jasiiradda Mallorca, heer kulkuna waa ilaa 41ºC.
Sidee bay xayawaanku u saameeyaan ugana difaacaan kuleylka?
Nooc kasta oo xayawaan ah wuxuu la kulmaa cawaaqibkiisa gaarka ah heerkulka sare. Falcelintooda dheef-shiid kiimikaadka iyo tarankooda ayaa saameyn ku leh.
Kuleylka ugu kulul ee Shanghai muddo 145 sano ah wuxuu dilaa 4
Shanghai, Shiinaha, waxaa soo foodsaaray kuleylkeedii ugu xumaa tan iyo markii diiwaanka la bilaabay, 145 sano ka hor. Waxay ahayd mid aad u xun oo afar qof ay dhinteen.
Xitaa haddii ujeeddooyinka heshiiskii Paris la gaadhay, tani uma adeegayso xasilinta El Niño. Ma doonaysaa inaad wax badan ka ogaato saamaynta El Niño?
Heerkulka sare, dhimashada ayaa aad u badan. Kaliya maaha kuleylka laftiisa, laakiin sababtoo ah kordhintiisa maalmo. Waxay keentaa khalkhal jidheed iyo maskaxeed.
Waa maxay mowjadaha kuleylka?
Waa maxay mawjadaha kuleylka iyo natiijooyinka ay leedahay? Haddii aad rabto inaad wax walba ka ogaato dhacdadan dabiiciga ah, haka waaban inaad gasho.
Waa maxay ifafaalaha El Niño?
Waxaan sharaxeynaa waxa ifafaalaha El Niño yahay, iyo saameynta ay leedahay. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sheegi doonaa haddii ay xiriir la leedahay isbedelka cimilada. Ha moogaan
Diiwaanka Cusub ee Taariikhda Heerkulka Spain
Toddobaadka diiwaanka taariikhda heerkulka joogtada ah ee waddanka oo idil. Labadaba heer gobol iyo gobollo kala duwan.
Waa maxay saameynta nacabka?
Waa dhacdo dhacda marka hawo badan oo qoyan lagu qasbo inay fuulaan buur.Ma rabtaa inaad wax ka ogaato saameynta foosha?
HYPERCAN: Duufaantii ugu xoogga badneyd ee jiri karta!
Hypercan, ama sida ay duufaan weyn oo jaangooyooyin kitaabiga ahi u khalkhal gelin karto cimilada. In kasta oo aysan jirin diiwaanno, haddana waxaa la ogyahay in maalin uun ay dhici karaan.
Waa maxay duufaan?
Ma rabtaa inaad ogaato waxa ay tahay duufaanku? Waxaan xallineynaa shakigaaga ku saabsan dhacdo awood u leh inay waxyeello culus geysato isla markaana qaado faa'iidooyin badan oo nolosha ah.
Abaarta Kenya waxay horey u noqotay masiibo dabiici ah
Waxaa jira durbaba saddex milyan iyo bar Kenyan ah oo u baahan gargaar bini'aadanimo sababo la xiriira abaarta daran ee ku dhufatay dalka.
Waxaan ku bilownay xagaaga kaydadka oo ah 53% wadartooda guud. Tani waxay u dhigantaa ku dhowaad 20% ka hooseeya wixii aan haysannay 2007.
Heerkulka sare iyo abaaraha ayaa noqda kuwa soo noqnoqda
Hadda xagaaga, iyada oo kororka kuleylka iyo hoos u dhaca roobka, xilliyada qalalan ayaa bilaabmaya.
Mawjadaha kuleylka dila waxay noqon doonaan kuwo soo noqnoqda
Mowjadaha kuleylka daran ayaa noqda kuwa soo noqnoqda sababo la xiriira isbeddelka cimilada, haddana weli waxba lagama qabanin si loo yareeyo qiiqa wasakhda keena.
Isbaanishku waa casaan kulul, ugu yaraan illaa Isniinta. Mawjadda kuleylka ugu horreysa waxay gelineysaa 34 gobol feejignaan, halkaas oo heer kulka ilaa 42ºC la gaari doono.
Supercell. In kabadan 160000 oo kilomitir wadada, tobanaan kun oo kamarado ah. Chad Cowan wuxuu muujinayaa muuqaal dabiici ah oo dabiici ah
Halkan ka raadi maxay yihiin 7 midab oo qaansoroobaad ah. Sidee loo sameeyaa qaanso roobaadyada? Waxaan dhamaantiin idiin sheegeynaa dhacdadan saadaasha hawada 🌈
Hillaac caalami ah ama dhimbiil, waa dhacdo aad u yar oo la arkay
Waa maxay ray-ka ama dhimbiiluhu? Waxaan xallineynaa shakigaaga si aad wax uga ogaato wax badan oo ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada.
Waxaa laga yaabaa inay dhacdo El Niño qeybtii labaad ee sanadka
In kasta oo xasilloonida ay sanadkan 2017 haysato, WMO meesha kama saareyso 100% in El Niño uu weli sii horumarin karo
Isbedelka cimiladu wuxuu leeyahay saamaynta kuleylka sii kordhaya, laakiin kororkaan isku mid ma noqon doono meelaha oo dhan.
Xilliga duufaanka, in kasta oo aanu si rasmi ah u bilaabmin illaa Juun 1, haddana wuxuu leeyahay halyeeyo 'Arlene', oo sameeyay 40 maalmood ka hor.
Saamaynta isbeddelka cimilada ee wabiyada Isbaanishku way ka weynaan kartaa kuwa lagu fikirayo ee ku saabsan Qorshooyinka Biyoodka
Duufaanta Katrina, waa mid ka mid ah kuwii ugu ba’naa ee soo mara taariikhdayada dhow
Duufaanta Katrina waxay ka mid ahayd duufaannadii ugu darnaa ee soo mara taariikhda dhow. Waxay dishay 1833 qof, waxayna waxyeello baaxad leh ka geysatay Mareykanka.
Qorshaha gargaarka ee abaaraha Bolivia
Abaarta ka jirta Bolivia waa tii ugu darneyd ee 25-kii sano ee la soo dhaafay. Mashaariic noocee ah ayaa jirta si loo yareeyo dhibaatooyinka abaaraha?
Abaaraha Soomaaliya waxay yareeyaan cuntada waxayna sababaan dhimasho
Soomaaliya gudaheeda, ilaa 196 qof ayaa u dhintay abaarta ku dhufatay sanadkan illaa iyo hadda biyo la’aan iyo cudurro.
Soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad musiibo qaran oo abaaraha ka dhalatay
Soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad feejignaan ah oo loogu talagalay abaaraha ku dhufanaya dhulka.
Waa maxay farqiga u dhexeeya onkodka, danabka iyo hillaaca
Duufaanadu waa muraayadaha dabiiciga ee layaabka leh, laakiin ma ogtahay faraqa u dhexeeya onkodka, hillaaca, iyo hillaaca? Gali oo waxaan kaa caawin doonaa inaad aqoonsato.
Dhacdada "La Niña" waxay sii wadi doontaa xaaladaha dhexdhexaadka ah bilowga sanadka 2017
Suurtagalnimada in xaaladaha deegaanka ee dhexdhexaadku ay sii socon doonaan xitaa iyada oo ifafaalaha "La Niña" uu yahay boqolkiiba 70-85.
Kuleyl daran oo ku dhuftey Australia ayaa dilaya fiidmeerta waaweyn ee duulaya Australia hurdadooda.
Dawaco barafaysan ayaa laga helaa Jarmalka mowjadaha qabow awgood
Mid ka mid ah sawirada sida weyn ugu faafaya internetka ayaa ah tan dawacada la qaboojiyey ee laga helay Wabiga Danube.
Miyaan isku qasnaa ereyada marka qabow qabow jiro?
Khubarada saadaasha hawadu waxay adeegsadaan xoogaa ereyg ah oo laga yaabo inaynaan sifiican u fahmin. Waa maxay ereyada loo adeegsado sixirka qabow maxaana ku wareernay?
Waa maxay duufaannadu
Waa maxay duufaannadu iyo noocee ayaa jira? Ma ogtahay farqiga u dhexeeya duufaanta cirifka, duufaanka kuleylka ah, iyo duufaanka? halkan waxaan ku sharaxeynaa dhamaan sirteeda
Faahfaahinta mawjadaha qabow ee Siberia ee ku dhaca Spain
Mawjadaha qabow ee Siberia ee aan la kulanno wuxuu gaarayaa meeshii ugu sarreysay Spain oo dhan. Aan aragno faahfaahinta.
Mawjad qabow oo Isbaanish ah: waddanka qaboojiyay (marka laga reebo Jasiiradaha Canary)
Mawjadaha qabow ee Isbaanishka ayaa barafka uga tagaya heerar aad u hooseeya, oo ka bilaabmaya heerka badda. Cimilo sidee ah ayaa la filayaa inay noqdaan maanta iyo berri? Waan kuu sheegi doonaa.
Waa maxay qabow qabow?
Hirarka qabow waa ifafaale heer kulkiisu aad hoos ugu dhacayo 24 saacadood. Laakiin halkee ayay ka soo jeedaan? Soo gal oo soo ogow.
Mawjadaha qabow ee Isbaanishka: heerkulka ka hooseeya eber iyo barafka waqooyiga iyo waqooyi-bari ee dalka
Mawjadaha qabow ee Isbaanishka ayaa diiwaangelinaya heerkulka ka hooseeya eber, iyada oo dhaxanku hoos u dhacayaan -13ºC iyo dabaylo aad u xoog badan oo gaadhaya 80km / saacaddii.
Roobabka iyo dabaysha saameyneysa dhammaan koonfur-bari ee Jasiiradda Iberia iyo jasiiradaha Balearic ayaa waxay geystaan ​​khasaaro badan.
Musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu xumaa ee dhaca sanadkaan 2016
Waxaan dib u eegeynaa musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu xumaa ee dhacay 2016: duufaanno, dhulgariirro iyo daadad sababay khasaaro baaxad leh.
Khatarta daadadka waxaa sii xumeynaya saameynta isbedelka cimilada. Taasi waa sababta ay Dowladdu u hirgeliso isbeddelada ku saabsan sharciga.
Xilligii duufaantii Atlantic 2016 waxay ahayd mid aad u kacsan, iyadoo 7 duufaano badankood ay geysteen waxyeelo iyo khasaaro.
Marka la eego saadaasha hawada ee maalmahan la sameeyay, kow iyo toban gobol oo Isbaanish ah ayaa looga digay roobab culus iyo duufaanno.
Duufaanta ka dhacday Valencia kaliya ma aysan dhaafin jidadka daadad, laakiin sidoo kale waxaa weheliyay qulqulka biyaha ee cajiibka ah.
Duufaanta Otto waxay gaartay Bartamaha Ameerika, halkaasoo ay ku dishay 3 qof Panama, marka lagu daro in ka badan 10 oo laga daad gureeyay iyo waxyeelo baaxad leh.
Argos, duufaantii ugu horreysay ee xilliga qaboobaha qaboojiso Mareykanka
Tan iyo Jimcihii la soo dhaafay, duufaantii xilliga qaboobaha ee Argos ayaa ka tagtay qeybtii woqooyi ee Mareykanka oo ay ku habsatay baraf iyo baraf.
Maxay ahaayeen duufaannadii ugu waxyeellada badnaa taariikhda?
Ma jeceshahay inaad ogaato waxa duufaannadii ugu xumaa ee taariikhda soo maray ay ahaayeen? Hadday sidaas tahay, soo gal oo fiiri qiimeynta.
Sidee tsunami u dhacdaa
Waa mid ka mid ah ifafaalaha ugu xun ee aan ku arki karno Dunida, laakiin ma ogtahay sida Sunaami u dhacdo? Kaalay oo anagaa kuu sheegeyna.
Qaar ka mid ah talooyinka aasaasiga ah ee ah "in aan soo jiidan" shucaaca iyo in aan la ogaan karin maxaa yeelay xaaladahan oo kale ma dooneyno in aan noqono halyeeyada.
Waxaa jira boqolkiiba dadka muujiya nooc ka mid ah argagaxa ama argagixisada marka laga hadlayo dhacdooyinka saadaasha hawada qaarkood. Waxaa loo yaqaan cabsida saadaasha hawada.
La Niña waxay noqon kartaa mid daciif ah bilaha soo socda
Waxaa la soo sheegay inay jirto fursad 50% ilaa 65% ah in La Niña ay daciifin doonto inta lagu jiro rubucii ugu dambeeyay iyo saddexda bilood ee ugu horreysa sanadka 2017.
Ayaa go'aaminaya magaca duufaannada?
Weligaa ma isweydiisay cidda go’aamisa magaca duufaannada iyo sababta loogu yeero sidaas? Gali si aad u ogaato sababta ay u leeyihiin magacooda.
Hadda markii Hurricane Matthew ay bixineyso dharbaaxooyinkii ugu dambeeyay, waxaan ka jawaabayaa su'aasha ah sababta aysan duufaano ugu jirin Spain.
Iyagu waa ifafaalooyin sababi kara waxyeelo weyn, laakiin sidoo kale faa'iido badan ayey leeyihiin. Raadi waxa ay yihiin faa'iidooyinka duufaannada.
Ha lumin faahfaahin oo fiiro gaar ah u yeelo 5 diiwaanka duufaanno waxyeello u leh halistana leh sida uu Matthew ku guuleystay inuu jabiyo.
In kasta oo ay isku egyihiin, waxaa jira noocyo duufaanno kala duwan. Gali si aad u ogaato sida ay u kala duwan yihiin iyo qaababka aan loo aqoon in ay yihiin duufaano.
Sidee duufaan u samaysmaa
Waxaan kuu sheegi doonaa sida duufaanku u unko, dhacdo saadaasha hawada ah oo cirka isku shareerta daruuro oo badanaa roob keena.
Farqiga u dhexeeya duufaanta, duufaanka iyo duufaanka
Fiiro gaar ah u yeelo farqiga u dhexeeya ifafaalaha caanka ah sida duufaan, duufaan iyo duufaan.
Nicole, duufaantii afar iyo tobnaad ee kuleylaha si ay uga sameysato Atlantic
Nicole waxaa la sameeyay shalay, duufaantii afar iyo tobnaad ee xilli duufaantii Atlantika ee, illaa iyo hadda, aan waxyeello u geysan.
Duufaanta Tropical Storm Matthew, oo la sameeyay Sebtember 28, ayaa maanta noqotay duufaan Nooca 2 ah, oo saamayneysa Antilles-ka Yar.
Duufaannada waa ifafaalo ku yar Spain, laakiin warka wanaagsan ayaa ah in laga yaabo inay duufaanno ka dhacaan Spain. Soo Galaya
Waa maxay abaartu maxayse saameyn ah oo ay soo saartaa?
Waxaan kuu sheegeynaa waxa abaartu tahay, waa dhacdo cawaaqib xumo aad u weyn u leh nolosha guud ahaan aagga ay dhibaatadu saameysey.
Sida lagu sheegay cilmi baaris cusub, isbadalka cimilada ayaa saameyn yar ku yeelan doonta abaaraha sidii la filayay. Waxaan kuu sheegeynaa sababta.
Duufaannadii iyo duufaannadii ugu waxyeellada badnaa sannadihii la soo dhaafay
Hadda oo ay tahay xilli duufaan iyo duufaan, waxaan ku tusi doonaa kuwa taariikhda baal dahab ah ka galay sannadihii ugu dambeeyay awooddooda wax burburinta.
Mawjadaha kuleylka bisha Sebtember, waa dhacdo aan caadi ahayn
Waxaan la kulmeynaa mowjad kuleylka aan caadiga aheyn ee Spain waqtigan. Heerkulka illaa 42ºC oo naga horjoogsanaya inaan xagaaga si caadi ah u dhammaanno. Maxay tani tahay?
Ma jeceshahay inaad ogaato waxa kuleylka kuleylka ugu xumaa ee soo maray Spain? Gali si aad u ogaato maalmihii ugu xumaa ee xagaaga ee dalku soo maray.
Noorway wax aan caadi ahayn ayaa ka dhacay: hillaac wuxuu dilay 323 caaro oo ku yaal Beerta Qaranka. Cajiib run ah? Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Duufaanta Gastón waxay ku sii xoogaysanaysaa badweynta Atlaantik, miyey gaari doontaa Spain?
Duufaanta Gastón, ee ugu daran xilliyada duufaanka Atlantic, ayaa sii xoogaysanaysa. Ma gaari doontaa Spain? Waan kuu sheegi doonaa.
Waa maxay ifafaalaha saadaasha hawada ee cirifka
Ha lumin faahfaahin oo fiiro gaar ah u yeelo astaamaha ifafaalaha saadaasha hawada sida cirifka.
Duufaanta ba'an ee Mindulle ayaa ku dhufatay caasimada Japan dabeylo ay wataan duufaanno oo qiyaastii gaaraya 180 kiilomitir saacaddii.
Duulaanka baranbarooyinka ee New York kuleylka kuleylka
Magaalada New York waxaa ku soo duulaya baranbaro Mareykan ah, waana heerkulka iyo huurka badan ee dhaqaajiya cayayaankan.
3 xiiso leh oo ku saabsan Nalalka Waqooyiga
Ha seegin faahfaahinta oo fiiro gaar ah u yeelo 3 xiisaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Iftiinka Waqooyiga.
NOAA waxay rajeyneysaa xilli duufaan firfircoon oo ka dhaca Atlantic
Sidee ayuu noqon doonaa xilligii duufaanka Atlantic? Sida laga soo xigtay NOAA, waxaa la filayaa inay ka firfircoonaaneyso sidii caadiga ahayd. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Cawaaqibta dhacdada La Niña
Gali si aad u ogaato waxa ka dhalan kara dhacdada La Niña, waana meelaha ay aadka u saameyso. Ha moogaan
Miyaad u malaynaysaa inaad wax walba ka ogtahay duufaannada kulaylaha? Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa 6 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan duufaannada oo sida xaqiiqada ah kaa yaabi doona.
Biyo-baxayaasha ama biyo-baxa waa dhacdooyin saadaasha hawada oo aad u dhif ah oo ka soo bilaabma badda. Gali si aad u ogaato sida ay u samaysan yihiin.
Xusuusnow oo ha lumin faahfaahinta wixii ahaa kulaylkii ugu xumaa ee soo maray Spain oo soo maray kana soo gaadhay taariikhdeeda oo dhan.
Gaarigaaga miyuu toosay isagoo wasakh badan? Badanaa waa dhacdo dhacda ugu yaraan sanadkii hal mar. Ogow sababta roobku u dhoobo.
Ma jeclaan lahayd inaad aragto qaar ka mid ah ifafaalaha cimilada dhifka ah? Hadday sidaas tahay, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Soo gal oo yaabi.
Kuleylkii ugu horreeyay wuxuu gaaray dhammaan Isbaanishka mowjadaha kuleylkuna wuxuu yeeshay muuqaal, taasoo keentay heerkulku inuu ka sarreeyo 40 darajo.
4 xiiso leh oo ku saabsan duufaannada
Iyagu waa mid ka mid ah ifafaalooyinka ugu xiisaha badan, laakiin wax kasta oo iyaga ku saabsan ma ka ognahay? Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa 4 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan duufaannada duufaanka ah oo kaa yaabin doona.
Hadda Spain waxay la il daran tahay heerkul sarre, waa xilli ku habboon in laga jawaabo su'aasha ah sababta hirarka kuleylka u dhacaan
3 xiisaha xiisaha leh
Waxaan kuu sheegeynaa 3 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan duufaannada, astaamahan saadaasha hawada ee iftiiminaya cirka oo aad noo soo jiitay.
Waa maxay dhacdooyinka cimilada ee daran?
Dhacdooyinka saadaasha hawada ee aadka u daran waa kuwa, xoogooda awgood, sababa ama u horseedi kara waxyeelo weyn dadweynaha. Raadi waxa ay yihiin.
Waa maxay baraf casaan ah
Ha lumin faahfaahin oo sifiican uga fiirso waxa yaabka leh ee barafka casaanka leh ee badanaa ka dhaca meelaha adduunka qaarkood wuxuu ka kooban yahay.
Waa maxay terral?
Ma rabtaa inaad ogaato waxa Terral yahay, dabeecaddaas dabaysha xagaaga diirran? Ku qor si aad u ogaato habka Dabaysha Catabatic.
Tani waxay noqon doontaa xilli-duufaantii 2016 ee Atlantic sida ay sheegtay NOAA
Sidee ayuu noqon doonaa xilli duufaantii Atlantika ee 2016? Sida laga soo xigtay NOAA, way ka sii yaraan kartaa sidii caadiga ahayd. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Waa maxay ifafaalaha La Niña?
Dhacdada La Niña ayaa dhici doonta sanadkaan saadaashuna ma fiicna maxaa yeelay waxay la mid noqon doontaa saameynta El Niño.
Laba maalmood ka hor gobolka Malaga oo dhan waxaa ku dhacay dhacdo la yiraahdo mini gale oo caan ku ah aagga Cantabrian.
Xilliga duufaanka ee Atlantic waxay yeelan doontaa waxqabad celcelis ah, oo leh shan duufaan, laba ka mid ah aad u xoogan. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa uu yahay hydrometeor? Hadday sidaas tahay, ha ka waaban oo soo gal. Waxaan sidoo kale kuu sheegi doonaa noocyada waaweyn ee jira. Ma adiga mise waad waayi doontaa
Maxay yihiin duufaanta duufaanka ee maxey tahay sababta aan uga walwalsanahay?
Weligaa ma maqashay duufaan xoog leh? Wax yar baa la fahansan yahay iyo dhacdooyin aad u khatar badan, oo sababi kara dhibaatooyin badan. Soo Galaya
Sidee ayay u dhacaan duufaannada ciidda iyo boodhku?
Ciida iyo duufaanka boodhku waa dhacdo aad u gaar ah oo ka dhacda dhulka oomanaha ah iyo semi-oomanaha ee adduunka, gaar ahaan Saxaraha.
Cielomoto, dhulgariir hawada ku jira
Cielomoto, dhulgariir ka dhaca hawada oo iyada loogu talagalay wali ma jiro sharaxaad macquul ah. Waxbadan ka ogow dhacdadan saadaasha hawada
Brinicle ama farta dhimashada, duufaanka badda
Brinicle, oo sidoo kale loo yaqaan farta ama gacanta geerida, waa duufaan badeed oo ka samaysanta baddaha u dhow tiirarka. Raadi sida ay u samaysan tahay.
Awooda cajiibka ah ee El Niño »Godzilla»
El Niño waa dhacdo dabiici ah oo saadaasha hawada oo la xiriirta diirimaadka Badweynta Atlaantik. Si kastaba ha noqotee, midka hadda socdaa wuxuu noqon doonaa mid aad u xun
Meelaha ugufiican meeraha ee laga ilaaliyo Nalalka Waqooyiga
Soo ogow meelaha ugufiican meeraha si aad u aragto Nalalka Waqooyiga oo aad ugu raaxeysatid dhacdooyinka saadaasha hawada ee ugu quruxda badan adduunka.
Mangroves, ilaalinta dabiiciga ah ee duufaanka
Maaddaama geedka loo yaqaan 'mangroves' la gooyey, duufaannadu waxay sababeen masiibooyin badan. Laakiin maxay faa'iido u leeyihiin nidaamyadan deegaanku? Soo ogow.
Wadamada ugu qabow meeraha
Ha lumin faahfaahinta waddammada meeraha ku dhibaateysan kuna dhibaateeya heerkulka ugu hooseeya oo jiilaalku runtii adag yahay oo adag yahay.
VIDEO: Dhalashada duufaan dab ah
Duufaanta dabka ayaa ah dhacdo cimilo dabiici ah oo la yaab leh laakiin aad u burburinaysa. Daawo muuqaalka dhalashadiisa. Adiga ayaa kaa yaabi doona.
Ma jiri karaa duufaanno Isbaanish ah?
Dhacdooyinkaani waa kuwo caan ku ah Mareykanka Mareykanka, laakiin sidoo kale waxaa dhici kara duufaanno Isbayn ka dhaca. Gali si aad waxbadan uga ogaato iyaga.
Musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu khasaaraha badnaa taariikhda
Dabeecadda waqti ka waqti waxay na tusaysaa xooggeeda, xooggeeda. Waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu daran masiibooyinka dabiiciga ah ee taariikhda.
4 filim oo kusaabsan masiibooyinka dabiiciga ah
In kasta oo xaqiiqadu had iyo jeer dhaafto sheekooyinka, ha moogaanin faahfaahin ku saabsan afarta filim ee soo socda ee ku saabsan masiibooyinka dabiiciga ah iyo inaad arki karto markasta oo aad rabto.
Ku raaxayso fiidiyowyadan 5 qaab-dhismeedka duufaanka F5 ee cajiibka ah. U fiirso sida ay u samaysmaan, laga bilaabo bilawga illaa ay taabanayaan hoos. Soo Galaya
Spain waxaa maalmahan ka socda duufaanno koronto oo ay weheliyaan biyo iyo roob dhagaxyaale. La soco sida loo dhaqmo haddii ay dhacdo biyo-xireen xoog leh.
Saddex duufaan oo ka tirsan Qeybta 4 ayaa isku mar ku dhuftey Badweynta Baasifigga, isla markaana soo saarey dhacdo saadaasha hawada ah iyada oo aan la helin taariikh iyo gebi ahaanba taariikh ilaa maanta.
4 dhacdo dabiici ah oo dabiici ah
Ha lumin faahfaahin si aad u ogaato 4-ta dhacdo ee ugu xiisaha badan ee saadaasha hawada ee kaa dhigaya inaad afkaaga ku sii fidiso.
Sidee kuleylka u saameeyaa xayawaanka
Kuleylka aadka u dheer ee dalka oo dhan dhibaatada ku haysa ma aha oo kaliya inuu si xun u saameeyo dadka, xayawaanku sidoo kale way la silcayaan oo ay ku xanuunsanayaan.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato hillaaca
Spain waxay la kulantay xaalad cimilo xumo maalmo ka hor duufaanno iyo hillaac fara badan, isla markiiba waxaan kuu sheegayaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato.
Sidee tsunami u bilaabmaa
Tani waa mid ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada ee ugu ba'an, maaddaama hirarkeeda ay cabbiri karaan in ka badan toban mitir. Soo ogow sida tsunami uu ku bilowdo.
Ha lumin faahfaahin oo fiiro gaar ah u yeelo haddii aad rabto inaad ogaato sida loo doorto magacyada duufaannada, duufaannada iyo ifafaaleyaasha kale ee saadaasha hawada.
Dhulgariir ka dhaca Nepal, oo ay saadaaliyeen saynisyahano
Sabtidii la soo dhaafay waxaa jiray dhulgariir xoog leh oo ka dhacay Nepal, kaas oo qayb ka noqon kara saameynta domino ee qaabeysa qaaradda Hindiya.
5 su'aalood oo si fiican kuu fahamsiin doona qarxinta fulkaanaha Calbuco
Fiiro gaar ah u yeelo 5-ta su'aalood ee soo socda oo kaa caawin doona inaad si fiican u fahamto wax kasta oo la xiriira qarxinta cajiibka ah ee volcano Cabulco
Daadadku waa ifafaalooyin sababi kara dhaawac culus oo u geysan kara maadiga iyo nolosha aadanaha. Laakiin waa daad?
Waa maxay duufaan sidee loo sameeyaa?
Weligaa ma isweydiisay sida duufaanku u sameysmo? Dhacdadan saadaasha hawada waxaa had iyo jeer la socda dabeylo iyo duufaanno xoog leh.
Sidee ceeryaantu u samaysantaa
Ha lumin faahfaahinta sida ceeryaantu u abuurmay una asal ahaanta u tahay, mid ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada ee ugu xiisaha badan iyo xanaaqa sababo la xiriira aragti la'aan.
Saddexda qorrax waa wax soo saar saadaasha hawada ah oo saameyn wax ku ool ah soo saaray ilayska mar ay isku dhacaan kristantariyada barafka ee daruuraha.
Dabka San Telmo waa dhacdo aad dhif u ah, laakiin mid soo jiidanaysa dareen badan, maadaama ay tahay plasma aan ololi karin.
Waa maxay dhulgariirro sideese loo cabiraa?
Dhulgariirku waa ifafaalooyin saadaasha hawada oo si isdaba joog ah uga soo baxa wararka. Laakiin waa maxay dhulgariirrada iyo sidee loo cabiraa?
Waa maxay roob cas?
Roob cas waa dhacdo aad u yaab badan oo la yaab leh oo saadaasha hawada, aad iyo aad u badan oo xitaa maanta ay jiraan cilmi baarayaal ka yaaban waxa dhabta ah.
Waddankee ayay duufaannada badanaa ka dhacaan? Soo ogow!
Tornadoes waa dhacdo saadaasha hawada oo waxyeello weyn u geysan karta. Dalka ay sida weyn u saameeyeen waa Mareykanka, oo in ka badan kun duufaanno ah sanadkiiba.
Qadarka roobab ee lagu cabbiray dhukayga
Qaddarka roobab ee lagu cabiray dhukunta dhirta dhulka ayaa iftiimisay inbadan qaababka cimilada ee kumanaankii sano ee la soo dhaafay, taas oo ku fidinaysa daraasadda liidata ee qaababka cabbirka diiwaanka fosil.
Anthropocene, ma ninbaa "u qalmaa" taariikh nololeed oo u gaar ah?
Saamaynta weyn ee ay bini-aadamku ku yeesheen meeraha iyo deegaankeeda oo sababay baabi'inta iyo xitaa beddelka wareegyada dabiiciga iyo cimilada ayaa suurtogal ka dhigaysa in la barto in lagu daro waxa loogu yeero Anthropocene ee miisaanka juquraafiga adduunka.
Muwaadiniinta meelaha sida Verkhoyansk, Yakutsk ama Oymyakon (oo labaduba ku yaal Ruushka) waxay ku nool yihiin nolol aad uga duwan tan aan haysano, ugu yaraan xilliga qaboobaha. Tusaale ahaan, darawallada magaalooyinkan waxay uga tagaan gawaaridooda jeexjeexan meelaha gawaarida la dhigto saacado badan inta ay dukaamaysanayaan ama howlo u socdaan, iyagoo badanaa kuleyliya saliida saliidda ah ee gawaaridooda dabeylaha si ay baraf uga diraan.
Duufaannada, maxaa loogu magac daray?
Taariikhda oo dhan, duufaannadu waxay heleen magacyo kala duwan. Qoondayntoodu way is beddeshay sannadihii la soo dhaafay illaa laga gaarayo nidaamka liiska.
Sunaami Kanariis ah wuxuu u hanjabayaa Mareykanka
Go'itaan ka soo baxa fulkaanaha jasiiradda La Palma ayaa sababi doonta sunaami awood u leh inuu ka gudbo badweynta Atlantik
Duufaanta kadib: sawiro
Aruurinta sawirada, lagana qaaday Mareykanka, taasi waxay naga caawineysaa inaan fahano sida ay dadka dhibaatadu saameysey ula qabsadaan gudbinta duufaanta.
Dhagxaanta keligood dhaqaaqda Dooxada dhimashada
In kabadan nus qarni cilmi baaris ah walina waa qarsoodi sababta ay dhagxaanta kali ugu dhaqaaqaan Dooxada Dhimashada California
Qaanso roobaadka rogan ma jiraa?
Qaanso roobaadka rogan waa dhacdo saadaasha hawada oo u baahan duruufo ka duwan qaansoroobaadyada caadiga ah. Meesha adduunka ee ay ugu badan tahay in lagu arko waa Woqooyiga Pole, in kasta oo isbeddelka cimilada uu sababi doono inay ka dhacaan meelo aad u qabow.
Sawirro burburka ay geysatay duufaantii Andrew sanadkii 1992
Sawirro burburka ay geysatay duufaantii Andrew (oo gaartay heerka ugu sarreeya, 5) sanadkii 1992 ee aagga Miami iyo koonfurta Louisiana.
Baro waxa la sameeyo inta lagu jiro dhacdooyinka cimilada daran
Hay'adda Maareynta Degdegga ah ee Federaalka ee Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda u soo bandhigtay tilmaamo taxane ah oo ku saabsan sida loo ilaaliyo naftooda iyo qoysaskooda inta lagu jiro dhacdooyinka cimilada daran, kuwaas oo si halisteeda leh ay ugu sii kordhayaan tirada isbedelka cimilada awgeed.
Dabaylaha Dabaylaha ee Dubai
Sawirka iyo fiidiyowga duufaannadii cajiibka ahaa ee ka dhacay Dubai.
Daruurtii 'Subaxnimo Subax', ifafaale saadaalin hawada ah
Daruurtii 'Morning Glory', waa ifafaale saadaal hawadeed oo ka dhacda Australia
Sawirada ifafaalaha saadaasha hawada ee loo yaqaan "ifafaalaha saddexda qorraxood"
Sawirrada Cimilada Ugu Naxdinta Badan Phenomena
Tiirarka iftiinka, saameyn qurux badan oo dhalaalaya oo si dabiici ah u dhacda marka barafka jawigu ka tarjumayo iftiinka Dayaxa, Qorraxda, ama iftiinka isha macmalka ah